XOG: Maxay ka wada hadlayaan M/weynaha Puntland & Masuuliyiin katirsan Imaaraatka Carabta?
DUBIA(P-TIMES) – Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa gaaray dalka Iskutaga Imaaraatka Carabta, isagoo halkaas kulamo kula yeelan doona qaar kamid ah Masuuliyiinta Imaaraatka oo ay ka dhaxeeyaan arrimo kala duwan oo ay ku jiraan arrimaha ganacsiga, Amniga & Maalgashiga.
Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu ogaaday in ujeedooyinka ugu waa weyn ee Madaxweynaha Puntland Siciid Deni u tagay Imaaraatka Carabta ay tahay sidii wax looga qaban lahaa mashaariicda Imaaraatka ay ka wadaan gudaha Puntland.
Madaxweynaha oo bilo kahor Dubia kula kulmay Madaxda Shirkada DP WORLD oo ay ka wada hadleen dhaqaajinta mashruuc dekeda Boosaaso, ayaa xoguhu sheegayaan in aan wali waxba laga qaban, taas oo ahayd in bilowga August ay ka howlgalaan labada dhinacba.
Deni, ayaa kulan la yeelan doona Madaxda Shirkada DP WORLD oo gacanta ku haysa marsada magaalada Boosaaso, sidaas oo kale waxaa lafilayaa in ay ka wada hadlaan waxyaabaha dhaqaajin la’a heshiiskii ugu dambeeyey ee ay galeen.
Warar hoose ayaa sheegaya in ay ka wada hadleen arrimaha ku wajahan arrimaha Federaalka o ay doonayso Imaaraatku Carabtu in aysan waxba u socon, waxayna isla soo qaadeen taageerada Puntland ee ku wajahan dhanka Jubbaland.
Sidaas oo kale mashruuca tababarka iyo saad-siinta ee ciidamada Badda Puntland ayaa kamid ah arrimaha kala duwan ee ay ka wada hadlayaan Imaaraatka Carabta iyo Puntland, kaas oo mudooyinkii ugu dambeeyey is qabqabsi ka taagnaa shirkad la siiyey Qandaraaska xarunta howlaheeda oo ay isku qabsadeen dhinacyo kala duwan.
Imaaraatka Carabta ayaa Puntland ka caawiya tababarada, saad-siinta iyo dhaqaale uu ku bixiyo ciidamada loo yaqaano PMPF-ta ee la dagaalanka Argagixisada iyo Ilaalada Badda ah, kuwaas oo mudooyinkii u dambeeyey khilaaf ka taagnaa Hay’ad laga leeyahay gudaha Puntland qandaraaska ku qaadatay howlaha adeegyada xarunta ciidamada.
Qaar kamid ah ganacsatada Puntland ayaa dhawaan cabasho ka muujiyey in aan wali la bilaabin qandaraaska dhismaha dekeda Boosaaso oo ay qaadatay DP WORLD 2 sanno kahor, waxaana loo arkaa in ay tahay talaabo ay Imaaraatku ku xanibanayaan dekedaha kuyaala Badda Cas oo ay hadda gacanta ku hayaan Berbera iyo Boosaaso.